. Paddy ala ọnọdụ ~ Layanan Buat Website Paling Murah Dan Terbaik
Paddy ala ala nke na- ada n'ihi na go88bet.com Agen Judi, Agen Judi Bola, Agen Bola Online, Agen SBObet Terpercaya osikapa cultivation . Ma nọgidere ma ọ bụ interspersed na kụrụ . All ụdị ala a pụrụ mee ogologo dị ka ọnọdụ nke osikapa cultivation ezu mmiri. Paddy ala nwere ike ewepụtara irrigated nkụ n'ala ahụ disawahkan , ma ọ bụ nke marshland - Fikiere ala opitoropi site eke drainage ọwa .2. Nkwadebe Wetland o tinyere n'oruỌgwụgwọ Aims ka ịgbanwe nkịtị Njirimara nke ala nke mere na mbụ ike oyi akwa na- ewepụghị na silt . Na otú ata ah u ga-anwụ ma decompose n'ime humus , ala aeration mma , ala n'ígwé nke ala -aghọ jupụta na mmiri ka ịzọpụta mmiri. Na nhazi nke paddy ala, mekwara Ndozi na mwube nke osikapa ubi na okporo mmiri . Bund ( galengan ) osikapa ịnọgide na- ọma kwekọọ na ikwado ndutịm ogbugba mmiri n'ubi ka ọ ghara imefusị mmiri ọgwụgwọ osisi na mfe .General Tilth gụnyere 3 n'ụzọ :1. Idei mmiri paddy ala mmiri jupụta n'ala.2. Ịkọ dị ka n'oge mmebi boulders wee gbanwee ala .3. Melumpurkan harrowing ibibi ma n'ala.· N'ihi 3- frasi nhazi nke ala iji 1/ 3 nke ngụkọta mmiri chọrọ mmiri chọrọ maka osisi n'uba· Nhazi ala site na mgbochi mmiri paddy ala plowed na raked mgbochi mmiri lengthwise na crosswise ka silt n'elu ezi ala .· Nhazi ala mba mgbe e mesịrị ka 15 ụbọchị tupu transplanting1. Ahịhịa na paddy ubiAhịhịa ndị achọghị osisi na ọnụnọ nke ugbo ala n'ihi na ala -arụpụta ga- enweta site na akuku emeputa . ( Wikipedia ).Mmachi ọrụaka ata ah u ma plastic . Oru , dị ka njikọ nke mmepụta usoro nke ugbo akuku . Ẹsụhọde ke mkpụrụ ruru ka ọnụnọ nke ahịhịa egbochi mmepụta nke osisi ibu site na iwu . Plastic , n'ihi na ndị a mmachibido na nkịtị na osisi . Mgbe ụfọdụ larịị , bara uru osisi nwere ike ata ah u . Kama nke ahụ, osisi na- na-emekarị weere na ata ah u nwekwara ike idineme intrusive . Dị ka ihe atụ , soybeans na- okokpon ke sidelines nke ọka akuku monocultures nwere ike na-ahuta ya dika ahihia , ma, ma intercropping usoro ndị isi kụrụ . Otú ọ dị , ụfọdụ ndị osisi na- mara dị ka isi ata ah u , dị ka egwuregwu mgbagwoju anya na ahịhịa amị.Igbo umu na ọtụtụ ndị na- etolite n'ala dị larịị osikapa emeputa ihe kachaa ibe , bụ ndoro mmiri na uro na-eguzogide ọgwụ aSOCCERINDO AGEN BOLA ONLINE WORLD CUP 2014 hịhịa . E nwere 33 umu ata ah u na-emekarị hụrụ na-eto eto na n'ala dị larịị osikapa cultivation , gụnyere 10 umu ahihia otu , 7 ụdị otu egwuregwu mgbagwoju anya na 16 dị iche iche ụdị ọmụmụ nke sara mbara epupụta . Otú ọ dị , ụfọdụ ata ah u akara ererimbot ke ata dee nke ọ bụla otu na- adade ke itienede okpokoro.Isiokwu 1. Aha Klas akara ererimbot ke ata Ahịhịa ke Osikapa Ubi Mpagharaahịhịa Group
Group mgbaghoju anya
Klas Akwụkwọ obosaraPaspalum distichum
Monochoria vaginalisEchinochloa crusgalli
Marsilea crenataLeersia hexandra
Limnocharis flavaLeptochloa chinensis
Dabere omimi nke mmiri, ọdịdị nke igbo ibu abụọ na ụdị , ya bụ ndị ziri ezi gbara ajọ dimkpa nke Wetland o tinyere n'oru ata ah u ma na igbo na-agbasa . Otu n'ime ahihia Salvinia molesta na- agbasa . Nte utịp emi ata ah u mee ka etisasịwo oxygen ke ala paddy ubi , ala ìhè osisi ike , nwere ike ime eutrophication ( ọnụnọ nke ochie epupụta ) nke na -eme ka elu -etoju nke etisasịwo CO2 .
Ahịhịa udi egwuregwu mgbagwoju anya dị paddy osikapa kụrụ gụnyere Cyperus difformis , Cyperus kyllingia , Scirpus formicoides , Fimbristylis littoralis ata ah u na- eme ka oke aku -emeghasịkwa , n'ihi ya, na ọ ka na- ike ọyọdJOKIBET.COM Agen Casino Online Terpercayae .
Ahịhịa na-enwekarị ke osikapa paddy ubi mmiri na ọkọchị, gụnyere otu n'ime ahihia , vegetative propagation iji stolon mgbọrọgwụ , na ata ah u tinyere ahịhịa agbasa . Piracy mbiomo na-eme ka ndị bi na a gbasaa , ọ bụ n'ihi na mgbe mere piracy ngwá ọrụ vegetative mmeputakwa ( stolons ) disconnected na -ebu pụọ. Na-eme ka ahihia igbasa na n'ebe ndị ọzọ .Echinochloa colonum
Ahihia na nke ọtụtụ ndị dị n'ala dị larịị mgbochi mmiri na asat. Ahịhịa na- esịne ke otu ahịhịa, ahịhịa ndị annuals , generative ozuzu bụ site n'iji osisi . Nke a na igbo bụ umunna na Echinochloa crusgalli ( Jajagoan ).Alternanthera philoxeroides
Nke a na igbo bu igbo nke na ọtụtụ ndị na- achọta osikapa paddy ubi mmiri na asat. Alternanthera philoxeroides si klas nke sara mbara akwukwo ata ah u, ma na-agbasa gbara ajọ dimkpa . Na proliferation a ahihia generative , na -enwe kwa afọ ata ah u . Ahịhịa na ọtụtụ gbasara ke Indonesia , edi ke Malaysia bụ . Ya mere, Alternanthera philoxeroides a kwarantaini ahihia.Cyperus Iria
Nke a na igbo bu igbo nke na ọtụtụ ndị na- achọta osikapa paddy ubi mmiri na asat. Nke a na igbo bu igbo si otu egwuregwu mgbagwoju anya , ha ziri ezi gbara ajọ dimkpa, bụ kwa afọ igbo , na ahihia proliferation akara ererimbot ke ata generative . Cyperus Iria ịsọ mpi bụ nnukwu ike.Marsilea crenata
Klova ma ọ bụ ntu Marsilea crenata Presl ọkà mmụta sayensị na aha ya. bụ osisi owo emi enyenede ubon Marsiliaceae . Nkọwa dị ka akwụkwọ osisi ( Steenis , et ọc . 2005 ) ( translation ) ) bụ nguzo - naanị osisi na epupụta ma ọ bụ na faịlụ a, menjari berbilang 4, petiole ogologo na ikwuwa , 2-30 cm anya, leaflets gafere , ihu , osisi pịrị ọnụ akanye ekara gburugburu àkwá, ma ọ bụ isi nkwocha fọrọ nke nta ka isi nkwocha , na a 3-22 cm ogologo 2-18 cm dum, onye ofufe ekara akwukwo veins nzute, mmiri anaghị ebili n'elu mmiri. Na-emekarị ke osikapa ubi , ditches na -emighị emi puddles .II. NSOGBU
Mazi Rino nwere tụụrụ paddy ubi , na otu afo nwere ike kụrụ ugboro atọ ka weere na ala bụ tụụrụ , mgbe ahụ, mgbe gara aga akuk ituDomino.com JUDI DOMINO, AGEN DOMINO, AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA u na- egbute , Maazi rino mba n'ala nkwadebe maka ọzọ akuku . Nsogbu chere ihu abụrụ ata ah u , mgbe a onye osompi nke staple kụrụ , karịsịa ná mmalite n'uba.
III . Analysis OKWUAhịhịa na-eto eto na paddy n'ubi ekesịpde by Mazi Rino chere na -abịa site na ike - gara aga akuku residues -anọgide na ala , n'ihi na nke a nwere ike ime ka uto nke ahịhịaRino - ekesịpde ala idịghe ke mkpọ ezie na mgbe ọ ga-eme ndị ọgaranya , mgbe ala ka ọtụtụ fọdụrụ - fọdụrụ nke gara aga akuku nke nwere nwere iji aka ndikọri ata ah u .Mmepe ga- egbochi isi akuku ata ah u , ya mere iwu n'etiti ha nwere ẹsụhọde ke mkpụrụ staple kụrụ .